musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India Inovavarira Kumisikidza mazana maviri Endege Atsva panosvika 200
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Vachitaura kuFICCI Transport Infra Summit "Kutarisa: Kuwedzera Pace Yekutakura Infra Development muOdisha," yakarongwa neFICCI Odisha State Council, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Hurumende yeIndia, Ms. Usha Padhee, akataura kuti ndege yeIndia. chikamu chakaona kukura kwakasimba mumakore mashoma apfuura uye chiratidzo chekuedza kweIndia kuhupfumi hweUS $ 5 trillion. Akataurazve kuti kufamba nendege haisi yeumbozha asi inzira yekufambisa inoshanda.
"Civil aviation haisi nzira yekufambisa chete asi injini yekukura yenyika,” akadaro. Mai Padhee vakazodaro India ine musika wechitatu pakukura wendege, asi yagadzirira kuva musika wechitatu pakukura kwendege pasi rose panosvika 2024. "Vanhu vanofanirwa kunge vachikwanisa kuve chikamu chechikamu chekukura kwendege," akawedzera. Bazi rezvendege, vakadaro, richatungamirwa nevemasangano akazvimirira uye hurumende ichaita semufambisi.
Nhandare dzendege mumaguta eTier 1 neTier 2 dzinopa mwero wakakwana wekugadzira mari yakazvimirira, uye uko mari yega yega isingaite, hurumende iri kuisa mari, akadaro Ms. Padhee.
Achisimbisa matambudziko aya, akati mabhizinesi ari muchikamu ichi anofanirwa kunge aine hunyanzvi uye kupindira kwemitemo nemafambisirwo anofanirwa kunge ari mushandisi. "Tinotarisira kugadzirisa matambudziko nemazano aya," akadaro Joint Secretary.
Achisimbisa zvigadziro zvekutakura zveOdisha, Amai Padhee vakati hurumende yehurumende yakaita kuti ive nehupfumi, uye kushamwaridzana chinhu chinokosha muOdisha. "Tine tarisiro yekuona kubatana kwakasimba," akadaro. Akataurawo kuti rezinesi reRourkela Airport richapihwa mumwedzi mitanhatu inotevera.
Mr. Manoj Kumar Mishra, Munyori, Electronics uye Information Technology, Munyori, Sainzi neTekinoroji, CRC uye Special Secretary, Commerce and Transport Dhipatimendi, Hurumende yeOdisha, vakati simba rezvikamu zvezvivakwa rinofanirwa kushandiswa kudzikisa mutengo uye. nyika iri kuisa mari yakawanda mukuvaka migwagwa yehurumende.
VaSurat Tripathi, CEO, APSEZ (Ports), vakati kubatanidzwa kwemichina muchikamu chekugadzirisa zvinhu kwakakosha zvikuru. Akataurawo kuti zvigadziriso zvekugadzirisa hazvigone kuonekwa zviri zvega, nekuti musanganiswa wemhinduro. Akasimbisa kuti mikoto yehupfumi uye kubatana kwakawanda kumadoko ndiko kudiwa kweawa.
Dr. Pravat Ranjan Beuria, Mutungamiriri - Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar, akati chivako chitsva chemumba chinogona kubata 2.5 mamiriyoni evatakuri pagore uye kubatanidzwa kwehurumende yega yega inofanirwa kune hurumende.
VaDillip Kumar Samantaray, Managing Director, Angul - Sukinda Railway Pvt Ltd., vakati budiriro munyika haigone kuitika pasina kugadzirwa kwenjanji.
VaSiba Prasad Samantaray, Managing Director, Odisha Rail Infrastructure Development Ltd., vakati njanji yakasvika kure maererano nekubatana nekunyaradza. "Isu tiri vatungamiri vekukura kutsva muOdisha, uye ino ndiyo nguva yekuwedzera network," akawedzera.
Amai Monica Nayyar Patnaik, Sachigaro, FICCI Odisha State Council uye Managing Director, Sambad Group, muhurukuro yavo yekugamuchira vakati, "Tinofanira kuongorora mikana yakasiyana-siyana uye mhinduro dzezvifambiso zvinobudirira uye zvinobudirira zvekufambisa kwatinogona kuwana mazano edu."
Mr. JK Rath, Sachigaro, Komiti yeMSME, FICCI Odisha State Council, Mutungamiriri, Machem, uye Mr. Rajen Padhi, Sachigaro weDare Rekutengesa kunze, FICCI Odisha State Council uye Commercial Director, B -One Business House Pvt. Ltd., vanoisa maonero avo pakuda kweiyo inoshanda yekufambisa zvivakwa mudunhu.
Max Hartshorne anoti:
November 25, 2021 pa 12: 25
Hapana chinhu muchinyorwa chino nezve kuvaka chero nhandare dzendege itsva. Musoro wenyaya iwoyo wakabvepi? Ndakapfuura nepakati peako asingagumi pop-up ads uye isingazungunuke vhidhiyo inoridza kuti ndiedze kutsvaga chero chinhu nezve airport nyowani haina chandakawana. Uye iwe unoti mumusoro wenyaya kuti vachavaka mazana maviri endege BY 200 ??? Makore maviri ekuvaka mazana maviri enhandare dzendege hazvina musoro.
Semupepeti uye munhu anonyora misoro yenyaya, une basa rekuti zita racho riratidze zvirimo munyaya. Uku ndiko kumwezve kumwe kuedza kwekuda kudzvanya here? Zvakanaka wazviwana.